Ogologo Ọdịnaya Ọdịnaya | Martech Zone
Monday, December 30, 2013 Tuesday, January 21, 2014 Savannah Marie
Oha na ndu n’ozuzu ha yiri ka ha n’agha-oso; ijide ma ọ bụ tufuo bụ ụkpụrụ maka ọtụtụ azụmaahịa. N'ezie, ndụ dị n'okporo ụzọ ngwa ngwa ewerela ọhụụ ọhụrụ na iwebata weebụsaịtị ndị dị adị iji kesaa ọdịnaya dị mkpụmkpụ - Vine, Twitter na BuzzFeed bụ naanị di na nwunye, ihe atụ ama ama. N'ihi nke a, ọtụtụ ụdị agbanweela uche ha iji nye ozi ndị ahịa ha chọrọ na obere snippets enwere ike ịgbari na njem. Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya; n'ọtụtụ ọnọdụ, nke a bụ ụzọ kachasị mma iji ruo ndị ahịa ndị ahịa na-efufu oge n'ịntanetị.
Agbanyeghị, mgbe ụdị dị iche iche mepụtara usoro azụmaahịa nke na-elekwasị anya na obere ọdịnaya na ozi, ha nwere ike ịlafu nnukwu foto, foto nke chọrọ ogologo na mkpụmkpụ iji nweta nsonaazụ.
Ogologo ụdị ọdịnaya dị ogologo dị ka ọ dị na mbụ. Ihe ndị na-esonụ bụ ụfọdụ ihe kpatara ya.
Mkpa na Mmetụta Ọchụchọ Nchọpụta
Ee, ebe nrụọrụ weebụ na-elekọta mmadụ bụ nnukwu isi mmalite maka ụdị dị iche iche. Ndị ọrụ dị n'ịntanetị na-ekerịta posts, njikọ na foto na netwọkụ ha na ozi nwere ike gbasaa na oke ọsọ gaa na ọnụọgụ ndị na - akparaghị ókè; nke a na-eme ka okporo ụzọ dị.
Agbanyeghị, mgbe ndị ahịa na-achọ ụfọdụ ozi akọwapụtara na isiokwu ụfọdụ, ma ọ bụ na-achọ nhọrọ kachasị mma maka ịzụrụ, ọ ga-abụrịrị na ha na-eji igwe nchọta ihe. Maka nke a, usoro ịre ahịa ga-enwerịrị ọdịnaya dị ogologo oge. Tweets na vine apụtaghị na nsonaazụ ọchụchọ mgbe niile n'ihi na ha enweghị ohere zuru oke maka njikarịcha isiokwu. Kama nke ahụ, saịtị ndị ejiri ọdịnaya emelitere oge niile dị mkpa ka na-ahụ ebe kachasị mma njin ọchụchọ na ntinye. Ọ bụrụ n'ị na-achọ ịga n'ihu ndị na-ege ntị n'ịntanetị nke yikarịrị ka ọ gbanwee, ọdịnaya dị ogologo bụ akụkụ dị mkpa nke usoro azụmaahịa gị.
Mkpebi ntụkwasị obi
Ndị ahịa chọrọ ịma dịka o kwere mee banyere ụdị ndị ha họọrọ iji azụ ahịa. Ha choro inwe ohere itinye aka na mmuta banyere ihe kpatara ulo oru a ji di, ihe o n’eme na onye n’eji ya. Ha chọrọ ịmekọrịta.
Ọ bụ ezie na ọdịnaya dị mkpụmkpụ bụ ụzọ dị mma iji nweta n'ihu ndị ahịa na ndị ahịa, ọ bụghị ụzọ kachasị mma iji gosipụta ntụkwasị obi na akara ga-adị n'ihu asọmpi ahụ. Contentdị ọdịnaya dị ogologo na-enye ndị ụdị ohere ị biputere ọdịnaya na-aza ajụjụ ma nye akụkọ ntolite siri ike. Ọ na - enyere ụdị aka ịmeghachi omume na mmemme ụlọ ọrụ na ịgbasa na isi ihe ọmụma dị adị nke ndị ahịa na ndị ahịa nwere ike. Ọ na-enye akara ahụ olu nke na-enye ohere ka ndị ahịa mara ya, ya mere ịtụkwasị obi, na-eto. Ihe atụ ụfọdụ nke ịga nke ọma ogologo oge gụnyere akwụkwọ eBooks, ederede ogologo oge ma ọ bụ ọmụmụ ihe gbasara isiokwu metụtara ụlọ ọrụ.
Mgbe ị na-abịakwute ndị ọrụ mkpanaka na ndị na-eme ọsọ ọsọ dị mkpa, ọ naghị enye ohere maka mgbakwunye-uru nke ụdị chọrọ maka mmekọrịta ndị ahịa ogologo oge; ọ nwere oke. Nnyocha e mere na nso nso a egosila na ọ bụ ezie na ọdịnaya dị mkpụmkpụ bụ ụzọ iji kwalite okporo ụzọ, ọ bụghị ụzọ kachasị mma iji jikọọ ndị ọbịa ma nye ha ihe kpatara ịlaghachi na, mechaa, gbanwee.
Dị ka akara, ma ọ na-arụ ọrụ n'ịntanetị ma ọ bụ na mmadụ, ihe mgbaru ọsọ kwesịrị ịbụ iji nyefee ndị ahịa ọ bụla ohere ọ bụla. Wantchọrọ ka ngwaahịa na ọrụ gị nye nsonaazụ nwere atụ nke na-agba ndị ahịa ume ịlaghachi naanị, kama ịkọrọ ndị ọzọ ahụmịhe ha. Nke a kwesịrị ịbụ otu maka weebụsaịtị gị. Wantchọrọ ka ọdịnaya gị nye ndị ahịa ihe mere ha ga-eji lọta, mụtakwuo ma kesaa ihe ha mụtara na netwọkụ ha n'ịntanetị. Ọdịdị nke ogologo oge na-enye ndị ụdị ohere iziga ozi ndị dị arọ karịa ozi dị nkenke na-enweghị obere omimi. Ọ na-enye ụlọ ọrụ ohere ịzaghachi mkpa ndị ahịa na ịchọrọ mgbe ha na-enyefe uru ha kwesịrị.
N'ime ụwa nke gbadoro ụkwụ na azụmaahịa ọdịnaya dị mkpụmkpụ, ịgbakwunye ọdịnaya ogologo oge na ngwakọta nwere ike ịbụ otu ngwaọrụ kachasị baa uru maka ịnọ n'ihu na ịme mmetụta na-adịgide adịgide.
Tags: content MarketingAhịa Ọdịnaya Ahịa-Dị OgologoUsoro
Ijikwa CTAs ma ọ bụ Mgbasa ozi na WordPress